Xasan Sheekh “Waan dacweyneyna, Kama hareyno, kuwa gurta Kheyraadka Badeena” – SBC
Xasan Sheekh “Waan dacweyneyna, Kama hareyno, kuwa gurta Kheyraadka Badeena”
Posted by Webmaster on May 1, 2013 Comments
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheeq Maxamuud
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhamaaday waqtigii dowladaha Shisheeye sida sharci darada ah ula bixi jireen Kheyraadka ku xeeran badweynta Soomaaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa saxaafada ka sheegay maanta in dowladiisu ogolaan doonin hada waxii ka dambeeya kheyraad si sharci ah loogala baxo badda kheyraadka badan ee Dalkeena.
“Soomaaliya wuu dhamaaday Waqtigii kheyraadkeeda si sharci daro ah loola bixi jiray, intii hore ee laga qaatayna waan ka dabatageynaa” sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shekh.
Waxa uu Xasan Sheekh warbaahinta u mariyay wadamada dadkoodu kheyraadka sida sharci darada ah ah ugala baxa Soomaaliya in ay ka ceshadaan .
“Waan la xiriirnay Dowladaha Aan xiriirka leenahay ee aan ku tuuhmeyno in dadkooda sida sharci darada ah uga kaluumeystaan, waana u sheegnay in ay ka ceshadaan dadkooda” ayaa ka mid ahaa mar kale hadalada Madaxweynaha
Waxa uu Madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kale ka hadlay wadamada maraakiibtooda Sunta ku shuba Soomaaliya isagoo sheegay in ay soconeyso dacwado arintaasi lagu baarayo ayna xukuumadiisa ka go’an tahay in iyadoo raceysa shuruucda caalamku leeyahay ay dacwadeyneyso kana daba hari doonin.
Sikastaba ha ahaatee Soomaaliya waxa ay leedahay xeeb dheer oo ay kheyraad tiro badani ka buuxaan, waxanaa qaab xatooyo ah ugala baxa gaadiid badeed aad u farabadan oo laga leeyahay wadamada shisheeye ee caalamka,